Iimoto zeapile zibekwe eScotland naseWales | Ndisuka mac
Izithuthi zeApple Maps zibekwe eScotland nase Wales
Kwisithuba nje esingaphezulu konyaka, iimoto zakwa-Apple bezityhutyha amazwe ahlukeneyo zibamba yonke into ezijikelezileyo, zisebenzisa izithuthi ezinenkqubo yekhamera efana naleyo ifumaneka kwizithuthi zikaGoogle ezaziwayo. Iimoto ze-Apple ziya kuqala hamba iindlela kunye nezitalato zaseScotland naseWales, ngakumbi iFort William eScotland naseBridgend County Borough eWales. Imihla ezakuqala ngayo uhambo lwabo zizakuba phakathi kwe-9 ne-22 ka-Okthobha, ephela nge-5 kaNovemba.
I-Apple, njengesiqhelo, ayichazanga izizathu zokuba kutheni ezi zithuthi ziza kuqala ukutyelela iScotland neWales, ithi kuphela iyafuna Ukuqokelela idatha oza kuyisebenzisa kwixesha elizayo ukuphucula inkonzo yakho yemephu, uphuculo oluza kufika kuhlaziyo lwexesha elizayo. Njengoko u-Google enze oko waqala ukubonelela ngenkonzo ye-Street View, bobabini ubuso kunye neepleyiti zelayisensi yayo yonke imifanekiso erekhodiweyo ziya kubonakala zimfiliba.
Okwangoku kubonakala ngathi izicwangciso zenkampani sukudlula ngokunikezela ngenye indlela kwi-Street View, kodwa kujonge nje ukufumana inani elikhulu leenkcukacha ukwandisa umgangatho weemephu, kuba inkampani ayixhotywanga kuphela ngeekhamera ngaphezulu, kodwa ikwanazo nezivamvo eziphambili ezifana neLiDAR.
IApple inokusebenzisa le datha kwifayile ye- inkqubo yokuqhuba ezimeleyo Apho ngokusebenza amarhe amaninzi, ukuze akwazi ukuyisebenzisa njengenkonzo yezothutho ngaphandle komqhubi, nokuba kungenxa yenkampani enxulumene nayo ephethe ukuyenza, kuba iProjekthi yeTitan iyekile ukuba yinyani Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, xa uApple waqonda ukuba ukwakha isithuthi kwasekuqaleni ngexesha elifutshane kwakungekhe kwenzeke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Izithuthi zeApple Maps zibekwe eScotland nase Wales
I-Adobe yazisa nge-2018 iinguqulelo ze-Photoshop Elements kunye ne-Premiere Elements
Ungazifaka njani iifoto kwi-Instagram ukusuka kwi-Mac usebenzisa iSafari